Archive du 20180327
Rajoelina sy Ravalo Tsy hipetra-potsiny
Mihazakazaka ny toe-draharaha politika ankehitriny, ka tsy mipetra-potsiny ireo sokajiana ho mpanao politika goavana. Niditra an-tsehatra nanao serasera i Andry Rajoelina manoloana ny volavolan-dalàna fehizoro momba ny fifidianana.
Antomotra ny fiafarany Mihorohoro ny fanjakana …
Tsikaritra ho mahatoky tena fatratra ny filoham-pirenena am-perinasa Hery Rajaonarimampianina amin’izao fa hahomby ny tetika rehetra hahafaha-mandresy amin’ny fifidianana.
Atahorana i Orlando Robimanana Hamoronana dosie maloto
Ezahina henjehina sy lotoina ankehitriny ny tale jeneralin’ny Tahirimbolam-panjakana teo aloha Orlando Robimanana satria malaza ho anisan’ny kandida hirotsaka hofidiana filoham-pirenena. Hamoronana dosie maloto isan-karazany hahafaha-mamotika azy.
Antoko maitso Miantso ny solombavambahoaka mba ho tonga saina
Miantso ny solombavambahoaka mba ho tonga saina ny filoha nasionalin’ny antoko Maitso Atoa Georget. Tsy kilalaon-jaza ny fifidianana.
Madagasikara Hanovo traikefa amin’ny Vietnamianina
Manatanteraka fitsidihana ofisialy eto Madagasikara ny filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena vietnamiana Atoa Phung Quoc Hien, nanomboka ny 23 ka hatramin’ny rahampitso 28 martsa.
Tobim-piantsonana vaovao Mitombo ny vola mivoaka any amin’ireo mpandeha
Manomboka gaboraraka sahady ny fitantanana ny tobim-piantsonana vaovao etsy Andohatapenaka.
Fampisehoana mandritra ny fetin’ny paska Misy mahavita mitety toerana dimy ny mpanakanto iray
Andro vitsy sisa no isaina dia hianoka tanteraka ao anatin’ny fankalazana ny fetin’ny Paska isika. Ankoatra ny fihinanana sakafo miova kely amin’ny mahazatra dia maresaka ihany koa ny fivoahana mitsangantsangana sy ny fijerena fampisehoana karakarain’ireny tranom-pamokarana maro samihafa ireny.
Fiahiana ara-tsosialy Nofanin’ny CNaPS ihany koa ry Masera
Tonga teto Antananarivo avokoa ireo solontenan’ny fikambanan-dry masera “Fo Masin’i Jesoa” niatrika fiofanana momba ny zon’ny mpiasa satria ry masera dia mampiasa olona maro amin’ny andraikiny toy ny fanabeazana, ny fitsaboana sy ny asa sosialy isan-karazany.
Olana eo anivon’ny Jesosy Mamonjy Manahatahaka ny politika ankehitriny
Mifanahatahaka amin’ny zava-misy eo anivon’ny tontolo politika Malagasy ny fifidianana filankevi-pitantanana eo anivon’ny fiangonana Jesosy Mamonjy eto Madagasikara.
Kung fu Wisa feno 38 taona Manambatra ny hery hanasoavana ny firenena
Ao anatin’ny fankalazana ny faha-38 taona nijoroany teto Madagasikara ny Kung fu Wisa amin’ity taona ity ka nisy ny hetsika lehibe notanterahana tany Tsiroanomandidy ny faran’ny herinandro teo ka nahavory mpiangaly ity haiady ity manodidina ny 4 000.
Baolina kitra - « Tournoi de Pâques 2018 » Vonona ny mpikarakara sy ireo kianja ary ireo klioba
Saika efa tonga eny Ambohipanja avokoa, toerana nokarakarain’ny ekipan’ny 3FA mpikarakara handraisana azy ireo, ireo ekipa avy any amin’ny faritra samihafa eto amin’ny nosy (Analamanga, Vakinankaratra, Betsiboka, Itasy,
Samia mijery fitaratra !
Na ny mpitondra na ny mpanao politika na ny vahoaka dia samy mifanome tsiny sy mifanilika ny hadisoana daholo. Ambentin-tenin’ireo mpanara-baovao fa ireo miaramila na ny fitsarana eto mihitsy no fositra.
Fanakatonana ny AAA-Tiko Nihetsika ny mpiompy ao Betafo
Miitatra ny fitarainan’ny tantsaha sy ny mpiompy manoloana ny fikatonan’ny AAA-Tiko.
Famahana ny olana ara-toekarena Tsy maintsy mila fitoniana politika
Nanomboka omaly no notanterahina tetsy amin’ny hotely Carlton ny fihaonambe ara-toekarena nasionalin’i Madagasikara. Sambany no nisy an’izany teto ary ny faribolan’ny mpandinika ny hary sy ny toekarena eto Madagasikara (CREM) no nikarakara ity hetsika ity.
Fampandrosoana eny ifotony Kaominina miisa 992 no nahazo famatsiam-bola
Kaominina miisa 992 tamin’ireo 1.059 nanao fangatahana tamin’ny banky iraisam-pirenena omaly no notolorana taratasim-bola 15 tapitrisa Ar avy teny amin’ny efitrano fandraisana fivoriana iraisam-pirenena eny Ivato.
Fiombonan’ny tany mampiasa ny teny frantsay Hampahaleotena ny vehivavy
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy omaly tetsy amin’ny foiben’ny fiombonan’ireo tany mampiasa manontolo na amin’ny ampahany ny teny frantsay (OIF) etsy Antaninarenina ny atrikasam-paritra mikasika ny tokony ho fomba fiasa vaovaon’ireo tany miray vondrona ao amin’ny OIF.
Mpanjakan’Antemoro Ampanabaka Nasandratra ny andriana Rakotobenarivo
Efa feno telo volana katroka no tsy nananan’ny foko Antemoro Ampanabaka mpanjaka taorian’ny fiambohon’ny Mpanjaka Rakotobenarivo ny volana desambra lasa teo nasandratra ny andron’ny zoma 16 martsa teo,
Fikambanana Ambalambahoaka Vita ny fampihavanana teo amin’ny samy mpikambana
Ny taona 1991 no niorina voalohany teto amintsika ny fikambanana Ambalambahoaka.
Fifidianana Filoha any Sierra-Leone Amin’ny 31 martsa ny fiodinana faha-2
Mafampana ny toe-draharaha any Sierra-Leone, mivoaka mampandry tany ny tafika ary hita amin’ny toerana maro.
Fandravana trano tetsy Andrefanambohijanahary Tsy misy hidiran’ny CUA
Manoloana ny fandravana trano tetsy Andrefanambohijanahary ny herinandro teo dia nitondra fanazavana ny fiadidian’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), mba hisorohana ny savorovoro sy ny hevitra mety mampiahiahy ny mponin’Antananarivo.